နှစ် (၆၀) အတွင်းအား နဲ့ ကျည်ဆံ (၁) တောင့် -
နာမည်တစ်လုံးနဲ့ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်လာတဲ့ Print Advertising Agency (သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း ကြော်ငြာအေဂျင်စီ) တစ်ခုကို Digital Marketing လုပ်ဖို့ ဖြောင့်ဖျခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခေါင်းမာတဲ့ (၆၅) နှစ်အရွယ် အဲဒီကုမ္မဏီသူဌေးကြီးက ဒေါနဲ့မောနဲ့ ဒီလိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ငါ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်ကြာ ဒီကုမ္မဏီကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လာတာ ဘာ Digital မှ မွေးတောင်မမွေးသေးဘူး၊ Digital Marketing ကိုအထင်မကြီးဘူး၊ လုပ်ဖို့လဲ မစဉ်းစားဘူး” တဲ့။ (အဲဒီတုန်းက ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ။)
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီရောက်တော့ Digital Marketing လုပ်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကုမ္မဏီငယ်လေးတွေက ကျော်တက်သွားလို့ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်လာတဲ့ ကြော်ငြာအေဂျင်စီကြီး အကြွေးတင်ပြီး၊ ဒေဝါလီခံလိုက်ရပါတော့တယ်။
(၁၉) ရာစုအဆုံးမှာ Lord Kelvin (President of the Royal Society of England) က “Heavier than air flying machines are impossible” “လေထဲကို ဝဲပျံနိုင်မယ့်စက် (လေယာဉ်ပျံ) ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး”။ များမကြာမီ၊ ၁၉၀၃ ခုနှစ်မှာ Wright brothers က လေယာဉ်ပျံကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၆ မှာ Darryl F. Zanuck, ကျနော်တို့ သိကြတဲ့ (20th Century Fox Studio) ရဲ့အကြီးအကဲ က “Television won’t be able to hold onto any market it captures after the first six months. People will soon get tired of staring ataplywood box every night.” “TV ဆိုတာကြီးဟာ ပေါ်ပင် (၆)လ လောက်ပါပဲ။ နည်းနည်းကြာရင် ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အဲဒီလေးထောင့်သစ်သားပုံး (ပေါ်ကာစ TV ကိုဆိုလိုသည်) ကိုဘယ်သူမှ နေ့တိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ Ken Olson (founder of Digital Equipment Corporation DEC / အခုတော့ Compaq ပိုင်ပေါ့) က အခုလိုပြောပါတယ်။ “There is no reason for any individual to haveacomputer in his home” “လူတိုင်း၊ အိမ်တိုင်း ကွန်ပျူတာသုံးဖို့ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိဘူး” တဲ့။
Microsoft ရဲ့ CEO ဟောင်း Steve Ballmer ကလဲ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ “There’s no chance that the iPhone is going to get any significant market share.” “iPhone ဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဈေးကွက်ရလာမှာမဟုတ်ဘူး။” လို့ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ကဲ .. သူတို့တွေအားလုံးက လူညံ့တွေလား။ လုံးဝ၊ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွက်ကိန်း မှားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်ထူးချွန်ခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ သိထား၊ တတ်ထားနဲ့ အသိဉာဏ်ပညာတွေကို ဘောင်ခတ်ပြီး၊ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအပေါ် လိုက်ပါစီးမြောနိုင်မှုအားနည်းစွာ လျစ်လျူရှု သုံးသပ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ကြော်ငြာခြင်းမှ စ,တင်လို့ SEO, SEM, GDN, EDM, YouTube စသည်ဖြင့် အဆင့်မြင့် အင်တာနက်ကြော်ငြာနည်းပညာများစွာ အသုံးပြုလို့ ရနေပါပြီ။ လူငယ် စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ Internet Marketing ကို အထူးသဖြင့် စတင်အာရုံစိုက်လာကြပြီ။ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို အနီးနားတစ်ဝိုက်ကလူတွေနဲ့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်သာမြင်နိုင်ပေမဲ့၊ Internet Marketing လက်နက်သုံးလိုက်ရင် တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေက စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမြင်အောင်လုပ်နိုင်တာကို သူတို့တွေ ကောင်းကောင်းသိကြတယ်လေ။
ခုဆို TV Channel တွေဆိုရင်တောင် များလွန်းလို့ ဘယ်လိုင်းကြည့်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။ ဂျာနယ် လက်ပွေ့ရောင်းတဲ့သူတွေလဲ တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားပြီ။
အတွင်းအား သုံးမလား (Traditional)၊ လက်နက်ကိုင်မလား (Digital) ??? 😂 😂 😂
ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ SEOMyanmar (01) 230 3270
Tags: Digital Marketing TrendOnline Marketing